आज पनि अमेरिका सहित धेरै देशका मूद्राको मूल्य बढ्यो, हेर्नुहोस कुन देशको कति ? – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/आज पनि अमेरिका सहित धेरै देशका मूद्राको मूल्य बढ्यो, हेर्नुहोस कुन देशको कति ?
आज पनि अमेरिका सहित धेरै देशका मूद्राको मूल्य बढ्यो, हेर्नुहोस कुन देशको कति ?
काठमाडौँ । आज असार २५ गते अमेरिकी डलरहित धेरै देशको मुद्राको मूल्य बढेको छ ।आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ७३ पैसा तथा बिक्रिदर १२० रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ । युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ८ पैसा र बिक्रिदर १ सय ५० रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको छ। यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १३५ रुपैयाँ ५ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय ३५ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ।
कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ५ रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ९२ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ८पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २८ रुपैयाँ २ पैसा तथा बिक्रिदर २८ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ।
युएई दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ६० पैसा छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ७६३ पैसा रहेको छ। कुवेती दिनार एकको खरिददर ३८८ रुपैयाँ ७४ पैसा तथा बिक्रिदर ३९० रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको छ। बहराईन दिनार एकको खरिददर ३१७ रुपैयाँ ५५ पैसा तथा बिक्रिदर ३१९ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ।
बेलायतमा अ’लपत्र दुई सय नेपाली स्वदेश फर्किए
हेर्दा हेर्दै सुनको भाउ अब पुरानो मुल्यतर्फ फर्किदै,आपूर्ति बढ्ने,मूल्य अझै घट्ने।